Kuziva nzira dzinonyanya kushanda dzekuchenesa mvura | Network Meteorology
Miguel Gaton | 02/12/2021 18:51 | Shanduko yemamiriro ekunze
ari tsvina yemvura yazova nyaya yeitiro hanya mumakumi amakore achangopfuura kubvira zvakafanana hazvigoni kutorwa uye kusakanganiswa nemhoteredzo pachayo. Panewo chokwadi chekuti miti yakawanda ye tsvina tsvina (kunyanya ayo ari muchikamu cheAsia neAfrica) anoshanda zvisina kunaka. Izvi zvinomiririra njodzi yakakosha kwete yehutano hwevanhu chete, asiwo kune zvakatipoteredza pachazvo.
Zvakawanda zvekushomeka kwatinoona mumakiriniki ekurapwa kunonyanya kukonzerwa kushandiswa kwemichina yechinyakare, bhajeti rakaderera rekuchengetedza kwayo uye zvipingamupinyi zve bureaucracy. Zvakadaro, nekuda kwekushushikana kuri kuramba kuchiita nyaya yemvura yetsvina, pave neruzivo rutsva rwekuirapa nemazvo uye nemutengo wakaderera. Ngatizivei zvimwe zvacho.
1.1 Iine huwandu hwakawanda hwekuita
1.2 Iine kuita kwakanaka kwazvo
1.3 Mari inogadziriswa
2 Mhinduro neCO₂ jekiseni
2.1 It is very customizable
2.2 Ndiyo mhinduro ine mari yakawanda
2.3 Mhedzisiro yezvakatipoteredza ishoma
Kugadziriswa kwemvura ne optimized ozone jekiseni Zvinoita kunge iri mhinduro yakanaka pamwe nekusadhura kudaro. Iyi tekinoroji inopa akawanda mabhenefiti akadai se:
Iine huwandu hwakawanda hwekuita
Ozone inopinzwa mumvura inokwanisa kubvisa kwete chete tupukanana tunokuvadza asiwo yakaoma organic komisheni uye isingaparare makemikari senge mercury kana lead.
Iine kuita kwakanaka kwazvo
Ingowedzera zvishoma ozone kumvura inofanira kurapwa kuwana disinfection yakakura uye kubviswa kwezvinhu zvinokuvadza. Neizvi, zvinokwanisikawo kutevedzera mirairo yezvino yekuburitsa. Hazvifanirwe kukanganwa kuti nekujova O3 kugadzirwa kwesludge uye sediment kunoderedzwa zvakare.
Ozone igasi reokisijeni rakapfuma kwazvo rinogona kushandiswa zvakare mumatangi ehupenyu. Izvi zvinoita kuti mhinduro iyi ive ne yakafara kupa pamusika uye naizvozvo, purofiti yakaisvonaka. Kushandiswa kwaro kunokurudzirwa pamusoro pezvose munzvimbo idzodzo uko kune kupikisa kwakasimba kubva pakusvibiswa kune mishonga yehupenyu.
Mhinduro neCO₂ jekiseni
Kana chiri kutsvakwa chiri kumisa alkalinity mutsvina uye, panguva imwecheteyo, kuderedza kukanganiswa kwezvakatipoteredza nekuda kwezvinogona kuitika zvechipiri, ipapo kushandiswa kweCO₂ jekiseni kucharatidza kuti ndiyo mhinduro yakakodzera. Ngatitarisei mamwe mabhenefiti ayo pazasi.
CO₂ jekiseni remvura kurapwa rinoshanduka kuita sarudzo inogoneka saka zvinogona kudaro yakagadziridzwa kune akawanda madivayiri. Izvi zvinoita kuti CO₂ jekiseni kurapwa kwemvura yetsvina imwe yeanonyanya kushandiswa uye akavimbika mhinduro pamusika.
Ndiyo mhinduro ine mari yakawanda
Kusiyana nekushandiswa kwemamwe mamineral magasi uye acids, CO₂ jekiseni iri mhinduro ine mari yakawanda, sezvo nekusarwisa zvivako uko inoshandiswa, inoderedza mari yekuchengetedza.
Mhedzisiro yezvakatipoteredza ishoma
Kupesana nemhinduro dzakavakirwa pakusarerekera CO₂, mhinduro nejekiseni regasi iri rine kukanganiswa kudiki pamhepo. Izvi zvinodaro nekuti iyi mhinduro inoshanda nekuteya zvachose CO₂ nekuichengeta muchimiro chehydrogen carbonate, chinhu chisina kwazvakarerekera chezvakatipoteredza.
Pamusoro penzira mbiri dzakapfuura, mamwe matekinoroji ehunyanzvi akadai sekurapwa kweokisijeni yakachena (Nexelia), membrane kusefa, masero emafuta ehutachiona, nezvimwe zvinofanirwa kujekeswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Shanduko yemamiriro ekunze » Kuziva nzira dzinonyanya kushanda dzekuchenesa mvura
Estonia: maitiro uye mamiriro ekunze